दिवाकर भट्टराई, (दमौली, तनहुँ )
गल्ति अरुको, दोष छ उसको !
सारा बेहोसी, होस् छ उसको !
बुबा आमाको कुलंघार सन्तान
निर्बाध डुल्छ, पोष छ उसको !
रोग भोकमा छट्पटाई रहेछन्
सकी नसक्नु, कोष छ उसको !
पिडामा रुमल्लिने अधिक छन्
जिबनभर सधै, तोष छ उसको !
अनाहकमा बुझाउन खोज्दथे म
मौनता टुट्यो, जोस् छ उसको !